Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 14:36
ဖုန်း မြင်. 11 June 2008 at 16:23
ဘရာဗို ညီမလေး အရမ်းကောင်းတဲ.ပိုစ်.ပဲ ဖတ်နေရင်းတန်းလန်းနဲ. အတော်ပဲစိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ် .......
ညီမလေးကို ကလေးလေး တွေ မေးတဲ.မေးခွန်း မျိုး ဘယ်တော.မှ မဖြေပါရစေ နဲ.လို. အကြိမ်ကြိမ်ဆု တောင်းရင်း .........
Anonymous 11 June 2008 at 17:00
ရွှေပြည်သူ 11 June 2008 at 21:32
မေရေ... ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ကျမိပြန်ပါတယ်။ ကလေးလေး ထိုင်ကန်တော့တာလေးရယ်၊ “ဆရာမ”လို့ ရိုးရိုးသားသား ခေါ်ပုံလေးရယ်၊ သမီးအမေတကယ် သေသွားတာလားလို့ မေးတာလေးရယ်... ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်အောင်ပါပဲ။ နေ့လည်က ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ အကြာကြီး ထိုင်စဉ်းစားနေမိတယ်။ အိပ်မက်တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ မေရယ်... လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့လေ... ခုချိန်မှာ ဒုက္ခသည်တွေလက်ထဲ အလှူပစ္စည်းထည့်ပေးနိုင်တဲ့ မေ့ရဲ့ဒါနကို အားကျမိသလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သာဓုခေါ်မိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းပါစေ သူငယ်ချင်း...
Anonymous 11 June 2008 at 21:44
အမတို့ ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာပဲ ကြိုးစားရတော့မယ်
အတတ်နိုင်ဆုံး နောက်မဆုတ်တမ်းပေါ့ ..
ရပ်လိုက်လို့ လုံးဝမရတဲ့ အတွက် မရပ်ပစ်ကြပါနဲ့လို့ ဒီကနေအားလုံးကို ပြောပါရစေ..။
သေးသေးလေးကို ကယ်တင်နိုင်ဦးတော့.. ကယ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြတာပေါ့.. ညီမရယ်..
မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ... ဝေးနေသေးပေမဲ့...
တာတူး 11 June 2008 at 23:57
တစ်ယောက်တစ်လက် နဲ့စုပေါင်းကြရင်တော့ ကျနော်တို့ အချို့အ၀က်တော့ ဖြည့်စွမ်းနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါသည်။ တက်တက်ကြွကြွ တစ်စုတည်း တစ်စည်းတည်းဖြစ်ဖို့တော့ လိုမယ်လို့ ကျနော်တော့ ထင်ပါသည်။ ပြန့်ကျဲနေလို့ကတော့ ဘာမှ မထိရောက်ပဲ ထမင်းစား ၊ရေသောက်လောက်နဲ့ပဲ လူကြီးတွေ ဘ၀တွေ ၊ အိမ်တွေ ပျောက် ၊ ကလေးတွေ လည်း အနာဂတ်ပျောက် တာပဲ အဖတ်တင်မယ်ထင်ပါသည် ခင်ဗျာ။
win zaw 12 June 2008 at 17:21
Tea 13 June 2008 at 17:41
pandora 14 June 2008 at 01:07
လင်းထက် 15 June 2008 at 15:41
ရေးထားတာ ဖတ်ရင်းနဲ့ အရမ်းစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်